Amaphephadonga amahle kakhulu aluhlaza we-Mac | ngivela ku-mac
Izithombe zangemuva eziluhlaza ezingcono kakhulu ze-Mac
Ngemva kokukuletha kulesi sikhala, okungcono kakhulu amaphephadonga we-mac futhi best izizinda zezintaba y i-playa, kumele ngisondele kuwe amaphephadonga amahle kakhulu we-Mac eluhlaza okwesibhakabhaka. Lo mbala, olinganisa ubude begagasi obuphakathi kuka-460 no-482 nm, waziswa kakhulu abaningi ngamandla awo okuphulukisa, ikhono lokuzolisa abantu futhi ngaphezu kwakho konke ngoba ungumbala ongathathi hlangothi kakhulu cishe wonke umuntu owuthandayo. Oluhlaza okwesibhakabhaka umbala wamanzi, wesibhakabhaka futhi siwubona njengento engokwemvelo. Yingakho lo mbala njengephephadonga ungcono kakhulu ongawubeka.
Kulesi singeniso esisha lapho ngithemba ukukulethela khona amaphephadonga aluhlaza okwesibhakabhaka angcono kakhulu, aqale ngaleyo engeke yaphuthelwa. Ulwandle Kulokhu ngikhethe amanzi azolile oketshezi olubalulekile olutholakala ngenani elikhulu emhlabeni. Ngendlela, imfihlo, kuvame ukukholelwa ukuthi ulwandle luluhlaza okwesibhakabhaka ngoba lubonisa isibhakabhaka, kodwa amalungu e-National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yase-United States athole ukuthi lo mbono awulungile. Ngokusho kongoti, ulwandle luluhlaza okwesibhakabhaka ngoba luveza ukukhanya kwelanga. Eqinisweni, ulwandle luyinto emangalisa kangangokuthi bambalwa abantu engibaziyo abangasho ukuthi luyinto emangalisayo futhi ephazamisayo ngesikhathi esifanayo.
Kumelwe ngivume ukuthi ngiyakuthanda ukubona amanzi ayo, yebo, inqobo nje uma ekhona ezolile futhi emini. Ebusuku kuyangethusa kakhulu futhi lapho amanzi egubha noma kunamagagasi amaningi, kunginika inhlonipho enkulu. Nakuba ngazi ukuthi i-Holy Grail yabaningi abafuna amagagasi ukuze bakwazi ukuntweza, ngincamela ukuhlala esihlabathini ngibukele ukuthi abanye benza kanjani.
Manje, umbala wolwandle ungase ungabi luhlaza okwesibhakabhaka ngoba umbala wesibhakabhaka awubonakali, ngoba isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka. Hhayi njalo, kunjalo. Sinakho ukushona kwelanga, ukuphuma kwelanga, ngisho nalokho kushona kwelanga okufana nomlilo okudaye isibhakabhaka sibe bomvu. Kodwa-ke uma sithi ukucabanga ngento eluhlaza okwesibhakabhaka, ngaso leso sikhathi siya ezulwini Kungakho kubalulekile kulokhu okuthunyelwe okuphathelene namaphephadonga aluhlaza okwesibhakabhaka we-Mac, ungakhohlwa ngesibhakabhaka. Nazi ezinye izithombe engiqinisekile ukuthi uzozithanda.
Masiqhubeke nokuzulazula kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukuthi akuyona yonke into engamanzi nesibhakabhaka. Sithola umbala kwelinye lamahora osuku athokozelwa abathwebuli bezithombe abaningi. Kubizwa ihora eliluhlaza okwesibhakabhaka, Yaziwa nangokuthi ihora lomlingo futhi manje uzokwazi ukuthi kungani. Ngokwencazelo isikhathi sangaphambi kokuphuma kwelanga nangaphambi kokushona kwelanga. Ukukhanya kulesi senzakalo kuthambile, kusabalele, kuwumlingo. Kwenza yonke into oyibonayo ibukeke izolile. Kumaphephadonga alandelayo, uzobona ukuthi kungani kuwumlingo. Konke kuthatha ngolunye uhlobo futhi leyo mibala ngokwemvelo ikhipha umlingo.
Imibala ibaluleke kakhulu. Njengoba ngishilo ngaphambili, okuluhlaza okwesibhakabhaka kufana nokuzola. Imibala inekhono lokuvusa imizwa ehlukene, ukukhiqiza imizwa. Oluhlaza okwesibhakabhaka umbala ohlotshaniswa nemvelo. Lapho sibona isibhakabhaka njengangaphambili, sibona ukuthi usuku lucacile futhi luzolile. Lokho kusenza sizizwe sijabule. Kodwa njengoba sibonile ezithombeni zehora eliluhlaza okwesibhakabhaka, singakwazi futhi ukulihlobanisa nezindawo ezibandayo kanye neqhwa. Uma sicabanga ngokucophelela, i-shades eluhlaza okwesibhakabhaka ihlanganisa izindawo ezineqhwa neqhwa. Kodwa lokho futhi kuthandwa kakhulu ngabantu abaningi abafayo.
Kodwa blue akuwona wodwa emvelweni. Sibona okuluhlaza okwesibhakabhaka ezindaweni eziningi futhi kungumbala ohlanganisa neminye eminingi. Umbala owusizo kakhulu. Eqinisweni, kukhona amaphephadonga amahle kakhulu asebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphakathi izithombe ezibizwa nge-conceptual. Lezo ezibonakala zisho lutho noma ezingenangqondo kodwa ezikubamba ngokushesha lapho uzibona futhi ongakwazi ukuyeka ukuzibheka. Uza kahle njengezithombe zangemuva zama-Macs ethu. Nazi ezinye engithemba ukuthi uyazithanda.
Singathola futhi izithombe ze izindawo ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka njengomlingiswa oyinhloko. Kuyiqiniso ukuthi uma singasebenzisi isibhakabhaka kuphela, ulwandle noma ihora eliluhlaza okwesibhakabhaka, izinketho zibonakala ziyindlala kodwa zikhona. Sizobeka izibonelo ezithile futhi nginesiqiniseko sokuthi ezinye zazo zizokhethelwa okungenani ngesikhathi sokukuphelezela emisebenzini yakho ngekhompyutha.
Singakwazi futhi ukukhetha lezo zithombe, nakuba sazi ukuthi azizona zangempela nhlobo, singazifaka ngoba, phela, okumayelana nokunikeza umbala omncane ezikrinini zethu zekhompyutha. Iphephadonga elenza amehlo ethu ajabule uma silivula. Yingakho nami ngizokwengeza lokho Mina ngokwami ​​ngiyabathanda Futhi ngiqinisekile ukuthi bazokujabulisa nawe.
Ngendlela, kunamaphephadonga amaningi ombala blue okuyizinto abstract ngokuphelele futhi lokho kuzoba usizo kulabo bantu abafuna i-minimalism ku-Mac yabo. Iphephadonga elinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa "elingaphazamisi". Ngisebenzisa leli gama ngoba ngiyazi abantu abaningi abafuna isikhwama sabo singabi ne-aseptic ngangokunokwenzeka ukuze bagxile kulokho okubhekwa njengokubaluleke kakhulu. Khumbula ukuthi kulokhu, kufana nokuthandwa futhi njengoba besho, ukunambitha imibala. Kodwa kulokhu sigxila blue.
Njengoba sesishilo ukuthi okuluhlaza okwesibhakabhaka ukuzola nokuzola. Kodwa ngingakuqinisekisa lokho futhi umbala wamahlaya, okungenani mayelana namakhompyutha. Manje uzoqonda ukuthi kungani ngikutshela. Khumbula ukuthi kimi kubonakala elinye lamaphutha amakhulu akhethwe yinkampani yeMicrosoft. Inkulumo yesikrini eluhlaza okwesibhakabhaka isike yasetshenziswa emisebenzini yansuku zonke yezimpilo zethu. Uma kubhekwa lokho kusho ukuthi kunento embi eyenzekile futhi iyisandulela sento ezophela. Ukhethwa kanjani umbala oluhlaza ukuze uxwayise ngento embi? Noma kunjalo, iWindows hehehehe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Izithombe zangemuva eziluhlaza ezingcono kakhulu ze-Mac
I-iPhone 13 itholakala e-Amazon ngama-euro angama-819 kuphela
I-AirPods Max ngama-euro angama-415 kuphela e-Amazon